धोकाभन्दा पनि बढी खतरनाक हुन्छन् तपाईंका पार्टनरका यी बानी,तपाईमा त छैन ? | सुदुरपश्चिम खबर
धोकाभन्दा पनि बढी खतरनाक हुन्छन् तपाईंका पार्टनरका यी बानी,तपाईमा त छैन ?
सुदूरपश्चिम खबर प्रकाशित : भदौ २१, २०७८ 36
२.आफ्नो सुविधाका लागि सम्बन्धमा रहनुः
सम्बन्धलाई राम्रो बनाइराख्ने सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरा समानताको भाव हो । यदि तपाईं सम्बन्धमा रहँदा आफ्नो मात्रै खुसी र इच्छा हेर्नुहुन्छ भने तपाईंले आफ्नो पार्टनरलाई सधैं दुःखी बनाइरहेको हुनुहुनेछ । त्यसकारण तपाईंले आाफ्नो स्वार्थीपनलाई सम्बन्धको बीचमा ल्याउनु हुँदैन । तपाईंले आफ्नो पार्टनरको कुरा, इच्छालाई बुझ्नुपर्छ र समानताको भाव राख्नुपर्छ ।
यदि तपाईं सम्बन्धमा हुनुहुन्छ भने नबिर्सिनुहोस् कि तपाईंको पार्टनर पनि त्यही सम्मानको हकदार हुनुहुन्छ जुन तपाईं उहाँबाट चाहनुहुन्छ । आफ्नो पार्टनरलाई सम्मान नगर्नु उनीहरुलाई धोका दिनुभन्दा खराब हो । महिला–पुरुष दुबैको आ–आफ्नै व्यक्तित्व हुन्छ । त्यसकारण दुबैले सम्बन्धमा रहँदा आफ्नो साथीलाई बराबरीको अधिकार दिँदै उस्तै सम्मान दिनुपर्छ । नयाँ पुस्ता बाट सभार